Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : teti-dratsy mitarika fampikorontanana | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : teti-dratsy mitarika fampikorontanana
Efa manambana ny loza, hany fomba afaka ametrahana ny resaka dia ny fanaovana azy mivantana, tononina ho kary ny kary, lazaina sobika ny sobika. Aleo mangina toy izay ifampiatsaravelatsihy izay fampandotsona fotsiny ny fery nefa tsy hampiova inona amin’ny loza efa mitatao. Mazava fa atahoran’ny fitondrana ny fifaninanana amin’i Marc Ravalomanana sy amin’i Andry Rajoelina, sitrany ny tsy filatsahan’ireo mpitondra roalahy teo aloha ireo, ary raha azony atao dia sakanany ny filatsahany. Efa-taona izao no nijoron’ny fitondrana amperin’asa ankehitriny, efa antomotra ity ny fifidianana vao arangarangany ho fitaovam-piadiana ny sampona fanakanana an’IRavalo sy I Rajoelina amin’ny fandraisana anjara eo amin’ny fifaninanana ho Filoha-pirenena handimby an’I Rajaonarimampianina. Mikasika an’iretsy roalahy tiana ahilika izay samy manana ny mpiomba azy, dila izay ny fotoana nahafahana ny fampiharana ny lalàna mikasika an’izay mety fanamelohana azy nanamafy ny fahaverezan’ny zony amin’ny maha olom-pirenena afaka mifidy no afaka ho fidina azy.
Marc Ravalomanana moa asa na nohon’ny afetsifetsena na nohon’ny fahatsotsorana dia sodokan’ny fanambaran’ny sasany finamanana ka tsy niraika momban’ny fikarohana fifanazavana mikasika an’ilay fanamelohana mipetraka aminy. Meloka indray izy raha nanantena ary mbola mihevitra fa ho vitavita fotsiny amin’izao iny raharaha iny.
Andry Rajoelina kosa dia nanaja tena, niala lavitra ka namela an’Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina anao an’izay vitany amin’ny maha Filohan’ny Repoblika azy. Raha toa tsy afa-po ity iraikalahy ity nohon’ny vokatra afaka hotoazana tsy ampy entina andresen-dahatra dia tsy Rajoelina velively no tokony ho sakatsakanana noho izany tsy fahavitana azy izany.
Raha mbola amperin’asa anie aza Hery Rajaonarimampianina, amin’izao fotoana efa ampototry ny fifidianana izao, raha vao mikasika ny fifidianana dia efa tsy mpitasara intsony ny tenany fa mpifaninana toy ny sasany. Raha toa mihevitra izy sy ny tarika mpanohana azy fa misy pentina tokony anakana an’iretsy rafilahiny amin’ny filatsahana dia tompon’ andraikitra voalohany izy tamin’ny tsy fampiharana an’izany nandritran’ny efa-taona.
Efa nanoman-tena nandritran’izay ny sasany, efa nisalotra ny fanamina amin’ny fanaovana « maillot » efa samy mamatotra gaodasy, vao taitra ingahirainy mpifaninana tsotra ka manandratra ny tenany ho arbitra dia anambara fa tsy « lany-match » iretsy kalazalahy hafa. Korontana no ho vokatr’izany. Ny kabary anefa dia nilaza hatrany fa ny fiarovana ny vahoaka amin’ny korontana no lahara-pahamehana voalohany.